ကိုဗစ်လူနာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ ကိုဗစ်လူနာတွေ ကို ကုသမှုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦး ရဲ့ အမှောင်ကာလများ – Let Pan Daily
ကိုဗစ်လူနာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ ကိုဗစ်လူနာတွေ ကို ကုသမှုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦး ရဲ့ အမှောင်ကာလများ
Let Pan | September 8, 2020 | Local News | No Comments
ဒီစာစုလေးဟာ ကိုဗစ်လူနာလဲဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ ကိုဗစ်လူနာတွေကို ကုသမှု ပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာလင်းစန္ဒာလှိုင်ရေးထားတာပါ။“ကိုဗစ်ကို ဂရုစိုက်သတိထားဖို့လိုလား”ကိုဗစ်လူနာလည်းဖြစ်ဖူးတဲ့၊ ကိုဗစ်ကို ရှေ့တန်းကနေပြီးလည်း တိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆရာဝန် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုဗစ်ကို ဂရုစိုက် သတိထား ဖို့ လိုပါတယ် လို့ ဆိုပါရစေရှင့်
ကိုဗစ်ပိုးအသစ်လေးဟာ အသွင်ပြောင်းပိုး ဆို တော့ သူက အားပိုပျော့လာမလား၊ အားပိုကောင်းပြီး ပိုဆိုးရွား ပြင်းထန်လာမလား ဆိုတာ ဘယ်သုတေသန စာစောင်ကမှ တိတိကျကျ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် ကိုဗစ်ကို မပေါ့ဆဘဲ သတိပြုဆင်ခြင်ကြစေလိုပါတယ်ရှင့်။ မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ်အပြင် မကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါ သွေးတိုး သွေးချို နှလုံးရောဂါတွေရှိသလို တခြားကူးစက်နိုင်တဲ့ တီဘီ ငှက်ဖျား သွေးလွန်တုပ်ကွေး အစရှိတဲ့ တခြားရောဂါတွေလည်း ခေါင်းထောင်နေတော့ ကိုဗစ်ကို ထူးပြီး စိတ်ပူ ကာကွယ်နေဖို့ လိုလို့လားပေါ့။ အဲ့ဒီမေးခွန်းကို မေးနေတဲ့ သူတွေထဲမှာ ဆရာဝန်တွေပါ ပါဝင်နေလို့ ကိုဗစ် ကို ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော လူနာတစ်ယောက် အနေနဲ့ပါ ပြန်ဝေမျှချင်ပါတယ်ရှင့်
(၁)ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတာ လေးလကျော်လို့ ငါးလထဲရောက်ပါတော့မယ်။ပုံမှန် လူကောင်း ပကတိအခြေအနေအတိုင်းပြန်မရောက်သေးပါဘူး။နောက်ဆက်တွဲနှလုံးကြွက်သားယောင်ခြင်းနဲ့ အားအင်ကုန်ခမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း (Post viral myocarditis နဲ့ fatigue syndrome) တို့ကို ခံစားနေရတုန်းပါ။ ဆရာဝန်တွေတော်တော်များများသာ အခုလို ကူးစက်ခံရရင် Workforce အင်အား အင်မတန်မှ ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ Overstretched ဖြစ်နိုင်ခြေ အလွန်များပါတယ်
(၂)ကိုဗစ်တိုက်ပွဲမှာ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက် ဂုဏ်ယူလေးစားမိသလို အလွန်တရာမှလည်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ ရောဂါပြင်းထန်ပြီး အသေအပျောက်ပိုများတာက BAME အုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့ Black, Asain and Minor Ethnicities (အာဖရိက၊အာရှနဲ့ တခြားအနည်းငယ်သော မျိုးနွယ်စုများ) ဖြစ်ပါတယ်။ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကတော့ အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာ ကိုဗစ်ပိုး အဆုတ်တွင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကို ဝင်ဖို့ ACE လို့ခေါ်တဲ့ Receptors တွေ အများအပြားရှိနေခြင်းကြောင့်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက အာရှလူမျိုးတွေဟာ Extended family လို့ခေါ်တဲ့ တစ်အိမ်ထဲမှာ မိဘ၊သားသမီး၊မြေးအတူနေတဲ့ လူဦးရေ အများအပြားအတူနေထိုင်လို့ ကူးစက်နိုင်ခြေပိုများတာ လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်ထဲမှာ တစ်အိမ်ထဲနေတဲ့ မိသားစုထဲက ယောက္ခမရော သားမက်ရော အဆုတ်ယောင် ပြင်းထန်မှုကြောင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် ကို တပြိုင်တည်း ရောက်သွားတာမျိုးရှိဖူးပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလူမျိုးတွေမှာမှ ရောဂါပိုပြင်းထန်ရတယ် ဆိုတာကို အကြောင်းရင်း တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူး
(၃)ကိုဗစ်လူနာတွေ အစုအပြုံလိုက် ရောဂါပြင်းထန်ပြီး ရောက်လာရင် စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ ဆေးကုနေရသလိုပဲ အရမ်းကို စိတ်ဖိစီး ပင်ပန်းပြီး ဝုန်းဒိုင်းကြဲကုရပါတယ်။ အချိန်က အသက်ဆိုတော့ အချိန်ကိုလုပြီး အသက်ကယ်ကြရတာမို့ လူရော စိတ်ရော အရမ်းကို ပင်ပန်းရပါတယ်။ဒီကြားထဲ အကာအကွယ်ဝတ်စုံတွေဝတ်၊မျက်နှာဖုံးတွေ တပ်ထားနဲ့ ဆိုတော့ ပူအိုက်မွန်းကြပ်ပြီး အသက်ရှူမဝသလိုခံစားရပါတယ်။အဲ့လို အသည်းအသန်လူနာတွေ အများကြီးနဲ့ ဓာတ်မှန်ရိုက်လိုက်ရင် အဆုတ်မှာ မွစိတက် ပျက်စီးနေတဲ့ လူနာတွေကို မကြုံရ မကုရစေချင်ပါဘူး
(၅)ကိုဗစ်ဟာ ရောဂါအခံရှိတဲ့လူနာတွေကို တကယ့်ကို ထဖောက်စေပါတယ်။အဆုတ်ယောင်ပျက်စီးတာအပြင် အတက်ရောဂါကို ထိန်းမနိုင်တော့တာ၊အသဲပျက်စီးတာ၊ဦးနှောက်ယောင်တာ၊ကျောက်ကပ်ယောင်တာ၊နှလုံးယောင်တာ၊သွေးခဲပိတ်တာ၊လေဖြတ်တာ အစရှိတဲ့ ရောဂါဆိုးနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအားလုံးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ အသည်းလူနာတွေကို ကြည့်ရတာ၊သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး အချိန်လေးမှာတောင်မှ မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရတာ၊ မိသားစုက နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ မျက်နှာလေးတောင်မြင်ခွင့်မရလိုက်တာဟာ လင်းတို့လို့ ဘေးကကြည့်နေတဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ အနေနဲ့တောင် ယူကြုံးမရ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။မင်းတို့ အဖေ၊အမေတော့ အခြေအနေမကောင်းလို့ လက်လွှတ်ရတော့မယ်နဲ့ တူတယ် လို့ တယ်လီဖုန်းကနေ ပြောပြရှင်းပြရတဲ့အခါ ရင်ကွဲမတတ် ဝေမျှခံစားရမိပါတယ်
(၆)ကိုဗစ်ကူးမှာ ကြောက်လို့ နှလုံးရောဂါ အစရှိတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါသည်တွေကလည်း ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းလာမပြကြ၊လာပြခွင့်လည်းမရ ဆိုတော့ အဲ့ဒီရောဂါသည်တွေကလည်း ဆေးရုံရောက်လာရင် ရောဂါတွေက တော်တော်သည်းပြီး ကျွမ်းတဲ့အဆင့်ရောက်နေ။ ဒါကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်တာ အရေးပေါ်လက္ခဏာပါ။ နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာ ဟုတ် မဟုတ် သိရအောင် ဆေးရုံလာပြကြပါ။ကိုဗစ်ကြောက်ပြီး မလာဘဲ မနေကြပါနဲ့ လို့တောင် Campaign တွေ ပြန်လုပ်ကြရတယ်။ကိုဗစ်နဲ့ မသေဘဲ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ပြီး သေမှာ စိုးလို့ပါ လို့ ရှင်းပြကြရတယ် တကယ့်ကို ပြန်မတွေးချင်သော စိတ်ဒဏ်ရာပေးသော မည်းမှောင် မှောင်မိုက်လွန်းသော အမှောင်ကာလများလို့ ဆိုချင်ပါတယ်…ထို အမှောင်ကာလများကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မတွေ့ကြုံ မဖြတ်ကျော်ရစေလိုပါ…
(၇)ကိုဗစ်ကာလမှာ ပိုမို တိုးပွားလာတာကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေရ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေ၊ အထီးကျန်ဆန်မှုနဲ့ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်းတွေလည်း မြင့်တက်လာလို့ စိတ်ကျန်းမာရေးလူနာတွေကိုလည်း အရင်ကထက်ပို အဆတွေတိုးပြီး ဂရုစိုက်ရတဲ့ကာလတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် တခြားရောဂါတွေတောင် ထူထပ်နေတာ ကိုဗစ်ကိုမှ ထူးပြီး စိုးရိမ်ကာကွယ် ဂရုပြုနေဖို့လိုလားလို့ မေးရင် အလွန်တရာမှကို လိုအပ်ပါတယ်လို့ အထူးဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်
နိုင်သလောက် Test, Trace and Isolate လုပ်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ရောဂါအခံရှိသူတွေဆီ မရောက်အောင် ကြိုးစား ကာကွယ်ကြရမှာပါရှင့်။ရှိသမျှအားတွေကို အကောင်းဆုံး အကျိုးရှိအောင် သုံးရင်း ကြိုးစားနေသလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း အထူးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရစေရှင့်
ရှေ့တန်းကနေ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပြည်သူတွေ၊ volunteers တွေကိုလေးစားဂုဏ်ယူဦးညွှတ်မိသလို နောက်တန်းက ပံ့ပိုးနေတဲ့သူတွေ၊အလှူရှင်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်။စွမ်းစွမ်းတမံ အတတ်နိုင်ဆုံး စွမ်းဆောင်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အမေစု ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ် ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း အလွန်လေးစားမိပါတယ်။ အဝေးကနေ လှမ်းပြီး အားလုံး ဘေးကင်း နေကောင်း ကျန်းမာကြဖို့ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့ပေးနေသလို ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးတွေကို ပြောပြဝေမျှရင်း ဒီလို အလားတူ အဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေ မကြုံရအောင် သတိပေးကာကွယ်ပါရစေရှင့်။အဝေးကနေလှမ်းပြီး မသိဘဲ ပြောမိသလိုများ ဖြစ်သွားရင်လည်း အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်။
CREMONA, ITALY – MARCH 29: (EDITORIAL USE ONLY) Nurses making the hearth sign at Cremona Hospital on March 29, 2020 in Cremona, Italy. The Italian government continues to enforce the nationwide lockdown measures to control the spread of coronavirus / COVID-19. (Photo by Marco Mantovani/Getty Images)
ဘယ်သူ့ကိုမှ အကြောက်လွန်အောင် ခြောက်ဖို့ မရည်ရွယ်သလို လုံးဝ မကြောက်ပါဘူး လို့ ဆိုနေသူများအတွက်လည်း သတိလေးထားပြီးတော့ ဆင်ခြင် စည်းကမ်းလိုက်နာစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ကိုယ့်အတွက်သာမက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ရောဂါအခံရှိသူတွေအတွက် အသက်ကယ်ကူညီရာ ရောက်ပါတယ်ရှင့်။
လက်ဆေး၊ Mask တပ်၊ခြောက်ပေအကွာကရပ် ဆိုတာအပြင် လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေ မသွားဘူး။ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရင်ကထက် ပိုပြီး နေကောင်းကျန်းမာအောင် ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ကြိုးစားနေထိုင်မယ် ဆို ကိုဗစ်ကပ်ကြီးကို စုပေါင်းအားနဲ့ အမြန်ဆုံး အတူတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်။သတိလေးထားပြီး စည်းကမ်းလိုက်နာ ဘေးကင်းကွာကြစေချင်ပါတယ်ရှင့်…
တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဟာ အသက်ပေါင်းများစွာ ချမ်းသာရာရဖို့အတွက်ရော နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာဖို့အတွက်ရော အလွန်တရာမှ အရေးပါနေလို့ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်း ပါဝင်ပူးပေါင်းအသက်ကယ်ကုသိုလ်ယူပေးကြပါ လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေရှင့် အားလုံးလည်း ကိုာ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြီးကို ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင့်
source : ဒေါက်တာ လင်းစန္ဒာလှိုင်
ကိုဗစ် စိန်ခေါ်မှု နောက်တခု ထပ်လာနေ ပြန်ပါပြီ၊ ဆေးရုံကဆင်းပြီး အိမ်မပြန်ချင် ကြလို့တဲ့
ဒီအမတစ်ယောက် ရဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးဘူး တာဝန် ရှိသူတွေ ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေး ကြပါဦး
အရမ်း ကောင်းတယ် လို့ နာမည် ကြီး နေ တဲ့ မိုးညှင်းမှ ကလေး အထူး ကု ဆရာဝန် ကြီး
မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်း ၄၂ ၄၃ကြားမှ ကြည်နူး စရာ မြင်ကွင်းလေး တွေ အချိန်အခါသင့် ကူညီ ပေးမှုပါ